Xiriirka Dadweynaha & Maareynta Dhibaatada - Kooxda Istaraatiijiyada Lincoln
Gy 2020 Kooxda Istaraatiijiyadda ee Lincoln
Xiriirka Dadweynaha & Maareynta Dhibaatooyinka
Adeegyada La Xiriira
Xiriirka Warbaahinta & Horumarinta Farriinta
Laga soo bilaabo horumarinta farriinta ilaa hirgelinta, istiraatiijiyad xiriir wax ku ool ah oo xagga warbaahinta ah ayaa muhiim u ah in laga dhex jaro buuqa sii kordhaya ee khadka tooska ah iyo warbaahinta.
Kooxdayada khabiirada isgaarsiinta waxay si dhow ula shaqeyn doonaan kooxdaada si ay u fahmaan ujeedooyinkaaga, caqabadahaaga & sumaddaada.
Waxaan markaa ka faa'iideysan doonnaa shabakadeena saxafiyiinta & khubarada warbaahinta, si aan u horumarinno istiraatiijiyad dhammaystiran oo warbaahineed oo bartilmaameedsanaya dhagaystayaashaada saxda ah.
Iyo, inkasta oo fariintaadu ay aad muhiim u tahay, ma noqonayso mid wax ku ool ah hadaadan haysan dadka saxda ah ee kuu soo gudbinaya. Tani waa sababta aan aad ugu xulan doonno waxa aan dirayno si aan u hubinno in qodobbada aad rabto ay had iyo jeer la kulmaan sida ugu macquulsan & kalsoonida leh ee suurtogalka ah.
"Waxay qaadataa ficillo badan oo wanaagsan si loo dhiso sumcad wanaagsan, iyo hal xun oo kaliya oo lumiyo." - Benjamin Franklin
Haddii aad ka shaqeyneyso inaad hagaajiso sumcaddaada ama aad firfircooni u sameyso si aad u maamusho sumcaddaada, kooxdeena ayaa kugu hagi doonta hanaanka wajiga badan ee ilaalinta wixii aad soo shaqeysay sannado si aad u dhisto.
Ka faa'iideysiga wax soo saarka istiraatiijiyad dagaal oo warbaahin ah, waxaan mudnaanta siin doonaa sidii aan kaa caawin lahayn inaad gacanta ku dhigto raadkaaga khadka tooska ah ee internetka maadaama ay u adeegayso sidii dukaamo aan qiimo lahayn nooc kasta oo adduunkan dijitaalka ah. Bixinta xeeladaha ugu horumarsan, waxaan hubin doonnaa in fiiro gaar ah loo yeesho ficilladaada wanaagsan halka diidmada si tartiib tartiib ah u lumiso darajo & muhiimad.
La-socodka Warbaahinta & Falanqaynta
La socodka marka & halka ay caqabadahaaga iyo arrimahaagu soo ifbaxayaan waa bilowga hawshan muhiimka ah.
Xaqiiqdii, geeddi-socodkani wuxuu aad uga badan yahay ururinta sirdoonka muhiimka ah ee kooxdeena ay falanqeyn doonto si loo qiimeeyo dareenka & loo aqoonsado ilaha sheekooyinka saameynta leh sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si aan go'aanno u gaarno oo aan si dhakhso leh wax uga qabanno.
Kooxdayadu waxay si dhow ula socdaan daabacaadda, khadka tooska ah, warbaahinta bulshada & warbaahinnada baahinta - iyagoo hubinaya inaysan waxba ka soo bixin dildilaaca.
Khariidadda Muhiimka ah ee Maalgelinta
Si sax ah u aqoonsashada iyo kala mudnaanta bartilmaameedka dadaalkaaga waxay noqon doontaa go'aamiye muhiim ah haddii aad gaari karto ujeeddooyinkaaga.
Kooxdayadu waxay adeegsan doonaan habab taxane ah oo lagu horumarinayo istiraatiijiyad dhowr ah oo algorithm ah si ay si sax ah u aqoonsadaan dhammaan go'aan-qaadayaasha saameyn weyn ku yeelan doona arrintaada.
Si kastaba ha noqotee, iyo tan ka sii muhiimsan, waxaan si isdaba joog ah u socon doonnaa moodooyin si aan ula socono una cusbooneysiino khariidadan. Tani waxay marwalba hubineysaa in aan wax ilo ah la lumin & in aan ku soconno waddada ugu wax ku oolka badan ee lagu gaarayo himilooyinkaaga.
Waxaa laga yaabaa inaad leedahay farriinta ugu weyn ee warshadahaaga; si kastaba ha noqotee, waxaa jira laba qaybood oo muhiim ah oo go'aamin doona waxtarka ololahaaga warbaahineed: bartilmaameedka dhagaystayaasha & xulashada farriimaha - iyo maaraynta saamayntu waa halka ay ku kulmaan labadan.
Waxaan si dhow ula shaqeyn doonaa kooxdaada si aan u fahamno astaantaada & bartilmaameedka dhageystayaasha si aan u garan karno saamaynta saxda ah si ay u fuliyaan qorshahaaga warbaahinta si wax ku ool ah - hubinta farriinta weyn inaysan lumin qashinka.
Ku Laabo Dhammaan Adeegyada
Kooxda Istaraatiijiyadda ee Lincoln
Waxbadan ka baro Lincoln
La kulan Kooxdayada
Meghan Cox oo ku taal ABC15 Arizona
Nathan Sproul Axadda Square Off
Lincoln wuxuu ku faanayaa inay qayb ka tahay #motorcadefortrade kor u qaadida USMCA!
joog Ka Warqab